July 2, 2020 NEWS 10
HARGEYSA(P-TIMES) – Sida uu shaaciyey wasiirka arrimaha dibada ee dalka Gambia, xildhibaano katirsan baarlamaanka dalkaas ayaa wada qorshe ay doonayaan in ay Somaliland ugu aqoonsadaan dal madax banaan, wuxuuna ku eedeeyey in aysan waxba kala socon xaaladdaha gudaha ee Siyaasada Soomaaliya oo ay uun sameeyeen talaabooyin aan sharci aheyn.
Wasiirka ayaa sheegay in ay Somaliland qeyb ka tahay Soomaaliya, wuxuuna sheegay in ay xildhibaanadan sameeyeen ole-ole kuwajahan in dalka Gambia uu noqdo mid Aqoonsi siiya Somaliland oo sheeganaysa in ay ka baxday Jamhuuriyadii Soomaaliya.
Noolaada reer Somaliland, albaab walba garaaca, qasnadaha haraatiya wax uun baa ka soo qaban, diidmo kasta oo dal inna diido waa guul aan gaarnay, waayo qaddiyaddeenii waan geynay, Allaahu maa balaqtu,Allow may kun sano gaadho, Taiwan baa weli tugaysa Ictiraaf waxayna ka horreysa dalal badan oo caalamka ah, Siyaasadda dunidu waxay isku beddeli kartaa daqiiqado , markaa ka quusan mayno, waxaan kala dooraynaa, Hoog iyo Halaag, iyo inaan meeshana iska fadhino, dhexda xidhano, Illaahay ku sugno. Calool adayg waa Allah wehelkii
Ama Africa tags ama wadamo yar taga oo barya waliina helayn aqoonsi ,Somaliland waa iney daba fariisataa soomaliya ,hadii kale markay soomalida kale israacdo ayaa or oridi doontaa
War soomaalilaan waxay aqoonsi heshay in 1960.Aqoonsi kale oo u harayna ma jiro.Waana maamul gobaleed ka mida soomaaliweeyn.Heedhee fakar oo meel dambe wax ka eeg.War haddii hargeeysa loo aqoonsado dawlad gaara soo loo aqoonsan mahayo Jig-jig,Gaariso,mombasa,Zinsibar,Oromo,Tigre iyo canfar.Taas weeye tan la diidayaa.Wakhtigii uu Daahir Riyaale hargeeysa xukumay baa wafti reer soomaalilaan ahaa tagay uk.Waxaas bay ka hadleen.Suuye Tony Blair war haddii an hargeeysa dawlad u aqoonsano see laga yeelayaa wadanka Nijeeriya oo ah boqol qabiil oo an isu keen-keenay?Calaa kulli xaal soomalilaan waa maamul gobaleed ee ha imaansadeen maamul hoosaadkooda.
Waar heedhe qolyahan somaliland heedhe ictiraaf waxba ugama dhimana aakhiraad joogtaaaye waar hedhe nimanka u ogolaw waxay qabsadeeen horumarka ay sameeyeeen waar yaahe rag rag ah oo aan la gaadhahayn ayaynu afka ku canjaro fajaysnaaa. Iga wale oo bile ictiraaf waxba uma yaqaaanan teeda kale tuunbadana waa kugula jiraaan macaanka ka jaqayaaan caqli caqli cid ka saraysaa ma jidho waar yaahe ciidan qaran. Xuduudo sugan. Lacag gaara. Passport gaara. Waar heedhe cidlo tuush ha ordin waa dawlad maxay ku falaysaa ictiraaaaf somaliland guulaysta
Naflacaariga Adna Aadan iyo Muuse Biixi waa wax layaab leh. Waxaa kasii daran sida ay shacabkooda u mihinayaan oo tanag maran ugu tumayaan!
Waxay la noqotay in dalalka juqraafi ahaan ka fog Somalia aysan waxba ka ogeyn xaalka Somalia. Malaha may oga in Gambia tahay dal muslim oo aad ula socda xaaladaha muslimiinta meel kasta oo ay ku nool yihiin. Gambia waa dalkii geeyey Golaha Ammaank (Security Council) in xasuuq (genocide) loo aqoonsado gumaadkii iyo qaxintii lagu sameeyey muslimiint Rohinga ee aqalliyada ku ah Burma.
Tan kale, waxay icitiraaf ka dooneen Taiwan oo iyada qudheeda wax ictiraafsanba yar yihiin. Taiwan waxay ahaan jirtay gobol China ka tirsan waxaana goostay askar fallaagowday 1949 markii shuuciyiintii uu hoggaaminayey Mao Zedong ay qabsadeen China inteeda kale. China weli Taiwan waxay uga dhigan tahay gobol iyada ka tirsan, dowladdii aqoonsatana xiriirka ayey u jartaa. Marka, ma jiro dal xiriir diblomaasiyeed la wada leh labadooda; waa in mid la doortaa. Sidaa awgeed, dalalka adduunku waxay doorteen China oo si walba uga muhiimsan Taiwan.
Taiwanta caynkaas ah ee dibboodday ayey Adna Aadan iyo horgale Faratoon ka dhigayaan inay guul aqoonsi gaareen. Somaliland iyo Taiwan waa labo qaawani ismaqaaddo.
Tan kale, bal eeg siyaasad xumida iyo naflacaarinimada ay China cadownimada kaga sameysteen. Ma dal Africa ama dunida saddexaad ah ayaa China ka maarma?
Nimankan haddii aay rabaan in aay dunidu aqoonsato, waddo taasi loo maro ayaa jirta ee iyada ha mareena. Marka hore ha ku dhawaaqeena in aay Diinta Islaamka ka baxeen oo aay Gaaloobeen.
Marka xigtana, Gaalo ha u xaqiijiyeena in uu arrinkaasi ka dhab yahay oo Gaalnimadu ha muujiyeena! Intaa haddii aay sameeyaan, waa xaqiiqo in aay Heli doonaan, aqoonsi soo deg degay oo dhaqso ah! Kkk
Daliisha arrintaasina waatan. East Timor oo ah Gaalo weliba Cawaan ah, Indonesia oo ah wadan Muslim ah ayaa khasab looga jiray oo aqoonsi iyo horumarinba la isugu daray!
South Sudan oo u badan Gaalo Cawaan ah, oo aanan qaranimo xitaa diyaar u ahayn ayaa Sudan oo ah, Dal Muslin ah si juujuub iyo cago jugleyn ah looga jaray, lana aqoonsaday oo xitaa East Africa oo Soomaaliya loo diiday lagu daray, Inkasta oo aay Gaalo ku khasaartay oo aay soo baxday, Cawaan nimadooda!
Ogsoonow, inta aay waxani oo dhami dhacayeen, Iidoor albaab kasta oo uu Gaal leeyahay wuu hor fadhiyey si loo aqoonsado. Si aay u qanciyaana, waxaay soo faagayeen Lafo aay ku jiraan, xitaa kuwii Awoowe yaashoodii hore.
Waxaay fahmi la’yihiin, wax aay fahmeen ilmaha yar yar. Taas oo ah, Inaanay Gaalo oggoleyn waddan cusub oo Magac Muslin sita oo UNta ku soo biiro!!!!!!!! Kkkkk
Qabiil Yar oo raba inuu ka goaan gaaro qabaailo ka balaaran qaybtoodana is le’eg yehiin sidee Ku dhici kartaa. Waalida soomaalida iyo fudeydka San loo meel deyin.
walaalaheen kasoo jeeda gobolka waqooyi galbeed way ogyihiin inaysan kamaarmeyn walaalahood soomaaliyeed laakiin waxaa ay qatyaan ka taagan yihiin koox yar oo wax magarato ah keliya wixii dantooda ah mooyaane.Aduunyadaan midnimo ayaa meel lagu gaaraa tafaraaruq waxba mataro ee dib haloo fekero yaan meelkasta lala soo taagnaanin lixdankii ayaa nala aqoonsaday waanala xasuuqay waxaasi hadal ma’ahan ee aqligu ha shaqeeyo umadda masaakiinta ah yaan lawaalin
Somaliland waligeed dib ula midoobi mayso Somalia Taas ku bushaarayso aqoonsigu waa iman
Taiwan waa dal yar oo ka dhaqaale badan Africa aqoonsigu Adi muuu wax kuu taro
30 sano failed baa tahay
Cabdishakuur Xerta says:
Waad ku mahadsan tihiin Faallada aad soo qorteen cilmi iyo garaaad baan idinka kororsaday laakiin ereyada aan isu adeegsaneyno arrinta waxba ka bedeli maayaan anagana wan isku dhibsaneynaaye aan qurxino ereyadeena